#Al shabaab oo soo bandhigtay Askar Dowlada ka tirsan oo dhankooda u goostay - Get Latest News From Horn of Africa
#Al shabaab oo soo bandhigtay Askar Dowlada ka tirsan oo dhankooda u goostay
Al Shabaab ayaa soo bandhigtay shan askari oo ay sheegeen inay ka goosteen ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Hiiraan, kadibna ay isku dhiibeen.
Askartan oo ku labisnaa dareeska ciidanka Milatariga Soomaaliya sidoo kale watay qoryaha AK-47 ayaa lagu soo bandhigay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, waxa ayna sheegeen askartan in ay ka tirsanayeen Ciidamada Dowlada ee Maxaas ka howlgalayay.
Shabaab ma sheegin Magacyada askarta ay sheegeen inay ka goosteen dowladda,isla markaana isku dhiibay,waxaana sidoo kale weli ka hadlin saraakiisha Ciidamada xoogga dalka ee Gobolka Hiiraan.
Askarta ka goostay ciidamada dowladda Soomaaliya ee degmada Maxaas ayaa la sheegay inay gadood ahaayeen, waxaana warbaahinta Al Shabaab ay daabacday in xubnahaan ay kamid ahaa ciidamada difaaca ee degmada Maxaas.
Warbaahinta Al shabaab ayaa sheegay in qaar kamid ah askarta lasoo bandhigay ay sheegay in ciidamada Itoobiya ee jooga Degmada Maxaas ay dhibaato badan ku hayaan dadka shacabka, waxa ayna sheegeen in ay go’aansadeen in Al Shabaab isku soo dhiibaan.
Saraakiil katirsan Al Shabaab oo ka hadlay goobta lagu soo bandhigayay askartan ayaa sheegay in ay soo dhaweenayaan cidii xagooda usoo baxsata, waxa ayna sheegeen in hubkooda loo lacageenayo.
Dhawaan degmada Maxaas waxaa ka dhacay dagaal qabiileed sababay dhimasho iyo dhaawac, waxaana xiisadda ay wali ka taagan tahay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.